CannabisCoin စျေး - အွန်လိုင်း CANN ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို CannabisCoin (CANN)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ CannabisCoin (CANN) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ CannabisCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $876 657.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ CannabisCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
CannabisCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CannabisCoinCANN သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00923CannabisCoinCANN သို့ ယူရိုEUR€0.0078CannabisCoinCANN သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00706CannabisCoinCANN သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0084CannabisCoinCANN သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0821CannabisCoinCANN သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0581CannabisCoinCANN သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.204CannabisCoinCANN သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0343CannabisCoinCANN သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0122CannabisCoinCANN သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0129CannabisCoinCANN သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.206CannabisCoinCANN သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0715CannabisCoinCANN သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0502CannabisCoinCANN သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.691CannabisCoinCANN သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.55CannabisCoinCANN သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0127CannabisCoinCANN သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0141CannabisCoinCANN သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.287CannabisCoinCANN သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0641CannabisCoinCANN သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.987CannabisCoinCANN သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩10.94CannabisCoinCANN သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦3.55CannabisCoinCANN သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.678CannabisCoinCANN သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.254
CannabisCoinCANN သို့ BitcoinBTC0.0000008 CannabisCoinCANN သို့ EthereumETH0.00002 CannabisCoinCANN သို့ LitecoinLTC0.00017 CannabisCoinCANN သို့ DigitalCashDASH0.000102 CannabisCoinCANN သို့ MoneroXMR0.000104 CannabisCoinCANN သို့ NxtNXT0.72 CannabisCoinCANN သို့ Ethereum ClassicETC0.00136 CannabisCoinCANN သို့ DogecoinDOGE2.66 CannabisCoinCANN သို့ ZCashZEC0.000112 CannabisCoinCANN သို့ BitsharesBTS0.284 CannabisCoinCANN သို့ DigiByteDGB0.295 CannabisCoinCANN သို့ RippleXRP0.0328 CannabisCoinCANN သို့ BitcoinDarkBTCD0.000318 CannabisCoinCANN သို့ PeerCoinPPC0.0306 CannabisCoinCANN သို့ CraigsCoinCRAIG4.21 CannabisCoinCANN သို့ BitstakeXBS0.394 CannabisCoinCANN သို့ PayCoinXPY0.161 CannabisCoinCANN သို့ ProsperCoinPRC1.16 CannabisCoinCANN သို့ YbCoinYBC0.000005 CannabisCoinCANN သို့ DarkKushDANK2.96 CannabisCoinCANN သို့ GiveCoinGIVE20 CannabisCoinCANN သို့ KoboCoinKOBO2.1 CannabisCoinCANN သို့ DarkTokenDT0.0085 CannabisCoinCANN သို့ CETUS CoinCETI26.67